Amazon လက်ဆောင်ကဒ် - သင်၏ ဦး နှောက်တွင် Porn အနိုင်ရရန်သင်၏ Reboot Success Story ကိုတင်ပါ
YBOP ၏သူငယ်ချင်းများမှဘလော့များ & Vlogs
တစ်ခုကအမေဇုံလက်ဆောင်ကဒ်အနိုင်ရမည်ဟုရန်သင့် Reboot အောင်မြင်မှုပုံပြင် Submit
သင်ပြောပြရန်ဖှယျ reboot အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နှင့်စကားများထဲသို့ချပြီးအဘို့အခွက်တဆယ်ရှိပါသလား? ငါက်ဘ်ဆိုက်စတင်ကတည်းက2နှစ်ပေါင်းဆင်နွှဲရန် reboot အဆောက်အအုံပုံစံရေးဆွဲခြင်းငါအမေဇုံလက်ဆောင်ပေးမယ်ကဒ်များအတွက် $ 175 ကွာပေးခြင်းပါပဲ
အကောင်းဆုံးကို reboot ဇာတ်လမ်းကိုတင်ပြအကြင်သူသည်ရန်။
ပထမဆု: $ 100 အမေဇုံလက်ဆောင်ကဒ်
ဒုတိယအဆု: $ 50 အမေဇုံလက်ဆောင်ကဒ်
တတိယဆု: $ 25 အမေဇုံလက်ဆောင်ကဒ်
entry နောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည် စက်တင်ဘာလ 30th, 2015
entries ကအနည်းဆုံး 800 စကားလုံးများကို (- သင်ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ရှည်လျား-form ကိုဒဏ်ငွေမအထက်ပိုင်းကန့်သတ်) ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
rebootblueprint.com (မှာ) Brian ရန်သင့်ဇာတ်လမ်းကို Email
"ကျနော့် reboot အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်"
"ငါသည် porn ဖြတ်ကတည်းကငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီပုံ"
"တကယ်ပဲငါ့ကိုမကူညီပေးခဲ့သည်သော5အမှုအရာသည်ငါ့ reboot မှတဆင့်ရ"
"10 ငါ၏အ reboot တစ်ဦးရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ထငျ"
အနိုင်ရရှိမှု entries တွေကိုဖြစ်သင့် ...
တခြားနေရာကနေ paste လုပ်ထားတဲ့ဘဲမိတ္တူ / (ကျနော်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်!)
အစစ်အမှန်ရုန်းကန်မှုများနှင့်အတူ -Honest, အစစ်အမှန်ပုံပြင်များ။ မာအစိတ်အပိုင်းများကိုဖုံးကွယ်ဖို့မလိုပါ။ ပြည်သူ့လည်းဖတ်ချင်တယ်။
ငါ (ဆုရရှိသူမဟုတ်သာ) ကျိုးနပ်များမှာခံစားရကြောင်းအားလုံးသော posts ထုတ်ဝေရန်ပါလိမ့်မယ်။ တွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်အပေါ်ထုတ်ဝေစေခြင်းငှါသဘောတူ www.rebootblueprint.com။ (ဆုရရှိသူလျော်ကြေးငွေပါလိမ့်မည်သာ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ)
ငါသည်သူတို့၏ reboot နှင့်အတူရုန်းကန်နေကြသမျှသောယောက်ျားတွေတချို့အံ့သြဖွယ်, အထောကျအကူ, လှုံ့ဆျောမှုအကြောင်းအရာရေးဖို့စာရေးဆရာများလာအောင်နှိုးဆွချင်တယ်။ ယောက်ျားတွေများများထွက်ရှိပါတယ်အခမဲ့အဘို့မိမိတို့ပုံပြင်များရေးသားခြင်းရှိပါတယ်စဉ်နှင့်အညီ, ငါဆုအထက်နှင့်ကျော်လွန်ပြီးသွားကြဖို့သင်တို့တွင်အချို့သောလှုံ့ဆော်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
(ဘရိုင်ယန်ကားအဘယ်သူနည်း, ငါ့ဇာတ်လမ်းကို Read ဒီမှာ။)